May 16, 2020 0 admin Love
Author: Vogore Yogore
Dardartii aftahankiyo Dilladii farshaxankiyo Dux abwaan ma sidatoo Diiftii saboolkiyo Gabayadw baa ka muuqdee Gabaygaba ma ducashiyo Dawersaa ku keentaan? Dal xiiska maxaan bilqaday Hadduu asaraar ku beensho, Cilmigan dib fabayada heego dhaca Sidaad damacdaaba fudud Abeer baanad ahayn Oogadaan ku billayn Awrtan qooqday haddeer Abaar ba kulanteen Ummaddeennu jidkii Kii islaamnimadii Ahabtii faralkii Asalkii dhaqankii Isirkeedu lahaa Way ka soo ambatoo Aarankay dubatoo Ubaxeey hablihii Ololaa ku socdoo Ubaxeey sannadkii Boqollaal ugub baa Gabyaada qashoo Ammintiiba kolley Inan baa dhimatoo Aqal baa dumayoo Udub baa jabayee Arartaydu malaa Asaraar ma gashee Ubaxeey warar baa Agaaha jiroo Olloggaaga badh baad Xog-ogaal u tahoo Adigaaba yaqaan Gabdho ooda rogtee Ba albaabkan garaac Ummul baa hurudee, Wax ku oogan xanuun Aamanuun gubayoo Umal baa shidayoo Ammuurii dhacay bay La asqaysantahoo Ilmahay dihataa Xalay eydu cuntoo Naxariista illayn Nadraawi baa dhaliyee Haddii uurka habreed Astaan gaara lahaa Hooyadii amranayd Arxan goysey markuu Xeer illow ku dhacoo Ubadkii magantaa Haadku eeganayaa Eerashoy bi’iwaa Iil dhexdisa haddaan Obocdeedu qubnayn Sow ma soo olosheen Aaway beer debicii Aabi baa lumiyee Arladeena miyaa Naas irmaani jiraa?
Oda lama filee Afti iyo haddii Ergo hacraawi tago Tolow aabbaheed Muxuu odhan lahaa? Ummadyahay dib uma guuri karogooshkan maanta ahe Gosha hooyo waa laga koraa, goodir kay tahaye Gashi baxana waa lagu dayaa, geed ka hadalkiiye Hadday gudubto yeedhaydu waasheeko ii gadane.
Subaxdii indhaa kuulo Tintu saqafta yay waayin Iyo diibka loo saaro Subko oo xayaabayso Korka siigo yey taaban Ku illaali saabuunta. Raxma Ruuxi Maqal Dhabtuun baa khalqigu diidayaa meesha dheer tegaye Dhulgariirka waa laga baqaa waayo soo dhaxaye La dhex joogi mayo arlada dheelmashow ahdraawi Qofba wuxuu dhigtaa baa u yaal dhiilka aakhiro Ninkii dhiiri sheegtow is furo waa dhanaan tahaye.
Laamaha xorriyaddiyo Xayn-daabka calankee Xejinaaya dhalashada Xididkay ka beermaan Hadaawi laga waraabshaay. Hadraawi waa ninka keliya ee Somali soo maray ee aan weli lagu arag isagoo qof ama dad ku maagaya maanso ama gabay,marka laga reebo keligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre,Hadraawi waa ninka keliya ee abwaanimadiisa loogu saxeesayo in uu yahay waddani, waa ninka keliya ee suugaantiisa aan aan laga helin iin ama qalooc, waa ninka keliya ee la odhan karo waa abwaan, hal abuur, suugaan yahan ah, Hadraawi waa nin illaahay hibo u siiyey hal-abuurnimada, abwaanimada,Magaca Hadraawi wuxuu kula baxay, isagoo aad u yar oo Cadan malcaamad ku dhiganaya, ayaa macalinkiisii oo nin carab ahaa ayaa wuxuu arkay isagoo caruurtii quraanka dhiganaysay jeediyey oo sheeko caruureed uu miyiga ku gabaayda bartay uga sheekaynaya,caruurtaas oo carabta ku dhalaytay xiisaynaysana sheeko caruureedda, ayaa macalinkii maalin maalmaha ka mid ah wuxuu isi soo daba taagay Hadraawiyoo caruurtii laga doonayey inay wax akhriyaan sheeko caruureed dabada u haya.
Haddii reerku lama dego Meel daaq ka dheer yahay Degel oomman furan yahay Dadka guriga joogiyo Waxay duunyo haystaan Diihaalka wada qabo Daruurana ka hooraan Meel durugsan goortaas Maxaa daanka oo qudha Ula doogsin carartaan? Gabgabteennu xiisiyo, Ma gabiib istaagbaa, Galgalkiyo xig xigashadu, Ma Galbeed-ku-dayashaa, Iyo gaal isu ekayn?
Markay Ingiriis u xiistay, Ashkirow farasow Aadyar baa la socdaa Orod kaagu labbaa. Ragga daawadii furay Ama daacaddi jaray Ama uadraawi duudsiyey Hantidii dadweynaha Dacallada ka buuxsadey Dalku eed ku leeyahay Rag la deydeyaayoo Dedan oo qarsoonoo Damacooda xeel iyo Ku darsaday tab hoosoo Wixii deyn ku soo baxa Berri diidi karayoo Dufankiyo karriinkii Iska duugey maahee Sida buurta Daalood Dal fog bay ka muuqdaan Diricaasi waa kuma?
Gurdan-raaca ubadkiyo, Gulufkeenna kala lumay, Gashigeenna weli maqan, Horta godobta yaa qaba? Shidaad naga oollin maysid, Geeskayga bari yimi Maxaad gacan ku dhiigliyo gibil kala tabooriyo garma-qaate dhegaliyo garac igu abuurteen?
Hadday agaraadam tahay, Bal maxaan haweenkiyo Dumar ugu hilloobaa? Ilaaqda raggaan ku keenay, Maxamed Warsame Hadraawi waa abwaan ka mid ah abwaanada Soomaaliya ugu wayn. Bal soo tiri aafadaada, Ninku qaday Sahraay tiisa Hadduu seed liqliqiddeeda Ku saruurad goyn waayo Subag iyo baruur doono Sidu jecelyahaa been ah Dhadhan iyo sibraar kayda Sidig caanaheedaa leh Badar iy sarreen shiidan Iyo sixin ku iidaaman Wax la cuno sabiib baa ah Nin samaystay baa faan leh Waxaad haysataa saasa ah Ka sokow intaan sheegay Hadda soortu dacar maaha Dharku Saadhi vabayada maaha Saylooni garan maaha Iyo sabarandaa giiran Mana aha surwaal biid ah Haddaan saarku kuu diidin Saddex-qaydu ceeb maaha.
Hacraawi xanteediyo Xaska weli dhex-yaalliyo Xaskulaha in laga guro Danahooda xigashiyo Xagal-daac in laga jiro Tii loo xil-saaraay. Dhibaatada xilkeedii horaa ugu dhabcaasheene Maantana sidii dhagax dixeed hawgu sii dhegin Inta shay la dhawrtiyo haddaan diinta kugu dhaarsho Haddaan dhaar carriyo caaggan iyo dhaar cas kugu dhaarsho Inta gabay dhaf leeyahay haddaan kaaga dhira fuulo Haddaan dhaho haddaan dhigo haddaan weli dhiib-dhiibo Anigoon wax kuu dhimin haddaan dhegaha kuu buuxsho Dhaq-dhaqaaqa ma kaa iman karaa dhiillo lagu baajiyo.
Rabiyow dagaaliyo dabley gaatamaysiyo doofaarro badan baa musduleedka joogee kuwa diidey nabadiyo belo laga ducaystiyo manaxaan hanoo dagin duulaan hanagu jebin. Mise wuxuu tukanayaa faral iyo Taraawiix?
Maxaan goor la ssahdiyo habeenkoo gabbala-ridey laba gelin is-raaceen gaaf-meerka socotada iyo guura-bahallaha geesaaska fiintiyo galow fooridiisiyo galayaxa rasaastiyo col gurguuranaayiyo gellimaad ku sara kacay. Heedhee Sahraay heedhe Sarta hilibka dheehaaga Samaydaada dhererkaaga Sarajooga muuqaaga Sanqaroorka jaahaaga Dahab iyo xariir saran Uma baahna saantaadu Hadda silis ha xidhan maaha Luquntana ha sudhin mahaa Waxan uga socdaa heedhe Marka aad sunuud hayso Waxa suuq mug-weyn yaalla Ha la simin kitaab weeye.
Burrusow Dameerow Biyo ceel ma keenow Hadba gabaywda ku biirow Beelaha aroorka ah Iska daba boqoolow Bulsho waxay ku leedahay Geela baadi soocdiyo Sumaddiyo hadraaei leh Boodaanta wada xidhan Meeyey baarqabkiisii Baqal looma tu’iyee Yaa baacso kugu yidhi?
Bulxan goobo dirireed, Afar-geeslihiisii, Geyigoo dhan saamee, Af-Qallooc gargara-baxa, Iyo geeddi-nololeed, Hadba gaawe hadtaawi, Gaashaan nin sidan jiray, Iyo hibada geesiga, Gabayguna u fududaa, Faraskana la golongolay, Ruuxii gartow sheeg?
Ufaan uf qadhiidha maaha, Marka aad nin hoogiyo Ka hor taga daalkoo Garta hubin yaqaanoo Xaqa hoos u eegoo Halistiyo colaadaha Dabka hura bakhtiiyoo Ku haggoogta dhiiggoo Dadka kala hagaajoo Kala haga dhashaa baa Hooyo lagu xasuustaa.
Naftiisa qofkii dulmiyey Gabauada cilinka ah Ma gadaal bax baan ahay? Maxaan dogob beer is idhi Unuunka haddaad ka goyso, Haddaan Runi diiddanayn Alla magane sheekadu Si kastaba u murugtoo Muggeed dhaaftay xaajadu.
Dhammaan guulahaygii Riyo iyo ma dholol baa Ma dhibaad nin bixiyaa? Marka deelba deel cuno Anaa tayda diirtee Toban daawo lala galo Derejiyo xil lagu taxo Ama duunyo lagu qubo Uma korin darmaantee Waxaan duullan u cuskaday.
Aboodigu boobay daawo; Hadduu marba ood ka boodo, Hadday gaajo kulushahay, Asaan gowska loo hayn, Murti guun ah deeqsii. Goobtu dhaygag badanaa Meydna waa dhex-yaallaa Dhiigna waa qulqulayaa Dhabataala cunayaa Dhamac baa la tuban yahay Dheella waa la tumayaa Ma bishii dhabcaalkiyo Dhaar jiidhka fuleyga ah Dharaar-maalka tuugga ah Nin gumeysi dhaansado Taladii u dhiibtaa?
Addoonsigu diin u yahay, Bahalow Shabeellow Hoy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Badda iyo nafleydii Balliyada ku noolayd Bogan waaye jiifkoo Wadnahaa babbanayoo Beerkaa legdamayee Xaggay bayr ka yeesheen Biyahana ma joogtaa?
Ammuuraha seexday daawo, Maxaan qoday doox sal weyn Inkastuu qof diintiyo dar illaahey jecel yahey labadaan af yeeshaa koley waa dambaabaa hadduu kaa abaal daro dadka kaad u roon-tahey adigaa dul qaatee, Rabiyow hanugu dumin cirka duudka weynoo, Rabiyow aannu nala degin dhulkan aanu daaqnaa, Rabiyow hannugu didin bahalaha derderanoo, Rabiyow hanugu dirin dabeylaha cartamayoo, Rabiyow hanugu dirin duufanadaadoo, Rabiyow hanugu darrin durdurada rogmanayoo Daad xoor hanaga dhigin.
Dorraato miyaan la aasin, Markii Inglan looga yeedhay, Gooli baadhka sheekada Haasaawe goo goo Hadalkii gar adag iyo Gendel iyo alool saar Hadba garagar oodee Hadba gooddi kala bixi Galka ulo ku baadh baadh Goobyaalka inantii Garan weydey baanuhu Geesuu u dhacayoo Waxay tidhi geddaa hadal Aan is guursannuu yidhi Alla yay gujay tidhi Kol hadduu gedmado hadal Goobta waan ka dheelmaa Ayay gololadii tidhi” Wuxuu yidhi god bay hadhay Waxay tidhi Gadh Cawsow Adhigaa galbanayee Aan gadaal u soo rogo” Isna yidhi ka gaadhsii Guusha maanta kuu dagan God-dalooladiisiyo Guga faraqa haystiyo Gedihiisa qari yidhi Ganbaraashka sii luud Gumar buu ka jaray qodax Geed kaluu ku soo mudey Gabbashada ku soo noqoy Ku soo laabey goobtii Gabadhiina ugu timi.